Rahoviana i Etazonia no mandoa hetra amin'ny toetr'andro amin'ireto baomba ireto dia alain'izy ireo? : Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 11 September 2019	• 2 Comments
Mampalahelo ny teny ny mahita hoe manohy manaparitaka ny baomba aminy ny US raha tsy eo ny tsimatimanota raha ny mponina eran'izao tontolo izao eo ambanin'ny tohan-kevitra diso "fiakaran'ny hafanana manerantany noho ny habetsahan'ny CO2 eny amin'ny habakabaka'voapetraka amin'ny hetra ambony izy. Feno avonavona ny telegraaf rahampitso maraina ny fomba nandefasan'ny herin'ny rivotra ny Tafika Fampiarahamiasa Tafiditra (anisan'izany koa i Holandy) ny nosy iray tany Irà misy fipoahana mihoatra ny 40. NY mpiady no hiery amin'ny nosy.
Izahay izao angamba dia mahita ny vaovao faran'izay maoderina misy anao sy ny fampielezan-kevitry ny propagande, mba hanomezana fahatsapana fa mbola miady amin'ny tafika mpiambina IS-namboarina izay tena ilaina tokoa amin'ny ady mahamenatra ao Syria. Io ady tany Syria io dia ilaina amin'ny fanamafisana ny fifandraisana eo amin'ny sehatra iraisan'ny fifandirana iraisam-pirenena eo amin'ny fahefana. Tsy maintsy manohy mino aho fa miady ny firenena, ka manohy mino ny zavatra mihetsika ao ambadiky ny script master izay mivoaka.
Inona ary izany 'master script' izany? Io soratra io dia mifototra amin'ny fahadiovam-po na, amin'ny teny hafa, dualism. Script izay manaraka faminaniana ara-pinoana, izay ireo mpitondra ara-politika sy ireo mpanafika azy dia mitarika izao tontolo izao amin'ny ady lehibe lehibe iray. Tokony ho momba an'i Jerosalema io ady lehibe farany io. Mazava ho azy fa tsy hitranga avy hatrany izany rahampitso, satria rehefa manomboka mamaky amin'ny alàlan'ny script ianao dia afaka mahita fa hisy fanjakana silamo lehibe tsy maintsy hijoro amin'izany. Nandritra ny taona maro ny famakafakana nataoko dia mety ho tonga any amin'ny fehin-kevitra fa io angamba ny Fanjakana Ottoman. Ny Fanjakana Ottoman dia mety ho tafaverina ao 2023, miaraka amin'ny fitondrana an'i Tiorka ao EU izay mifanaraka amin'ny andrasana. Manoro hevitra anao aho amin'izany toe-javatra izany ity lahatsoratra ity vakio tsara, sao dia hazavaiko fatratra izany fanantenana izany. Ny ady tany Syria dia nanome ny tafika Tiorka ho sehatra fampiofanana mahafinaritra ho an'ny fitaovam-piadiana vaovao rehetra ary nasehony koa ny fomba famoronana voalohany ny volo (na kosa: kapoka) teo amin'ny fifandraisan'i Etazonia sy Torkia.
IS no fahavalo noforonina ilaina hanaovana an'io ady io izay ahafahan'ireo fitsapana ny fitaovam-piadiana vaovao rehetra ary aiza no nahatongavan'ny famantarana avy amin'ny sangan'asa. I Tiorkia no firenena matanjaka mipoitra ary i Etazonia no fanjakana Zionista lehibe mihena. Mety tsy ho ela akory raha tsy ela ny hegemony amerikana, izay mifototra indrindra amin'ny dolara sy ny fahamboniana any amin'ny miaramila no tena mifarana. Ary raha mifantoka amin'ny ady ara-barotra eo amin'i Etazonia sy i Shina ny rehetra ary ny mety ho vokatr'izany ho ady ara-batana, i Turkey dia afaka manome fahafaham-po ny kompania-indostrian'ny miaramila ary samy mijery ny goavam-piadiana roa. Ny ady tany Syria dia nanome an'i Tiorkia, ankoatry ny fitsapana ny heriny miady any Syria Avaratra, ny fitaovam-piadiana 'crane mpitsoa-ponenana', izay afaka (ary mbola afaka) nanery ny EU.
In ity lahatsoratra ity ao amin'ny Brandon Smit dia azonao atao ny mamaky ny fomba namakianao ny ady teo amin'ny Etazonia sy i Shina ihany koa ao amin'ny script script. Ny fahefana eran'izao tontolo izao dia miasa amin'ny alàlan'ny soritsoratry ny ady noforonin-tena sy "fifanoherana mafy amin'ny sehatra hita maso", mangingina ao anatin'ny fandaharam-potoana mitovy amin'ny tanjona faratampon'ny governemanta iray izay hitsangana avy amin'ny korontana amin'ny ady lehibe farany. Ny fiandrasana andrasana amin'ny Fanjakana Ottoman, noho izany, dia ho vetivety ihany ary handray anjara amin'ny korontana eran'izao tontolo izao izay hatsangana amin'ny alàlan'ny ady lehibe fahatelo.
Ireo voalaza etsy ambony ireo dia azo takarina tsara raha mamaky tsara ireo lahatsoratra ambanin'ny rohy manga.
Lisitry ny rohy loharano: telegraaf.nl, alt-market.com
Hanomboka! Faly sy mahasalama 2019 ho an'ny mpamaky rehetra!
Ny ady lehibe Brexit dia drafitra efa voarindra mialoha
Mandoro an'i Amazona, may ny havokavon'ny tany!
Tags: 40, baomba, Mitambatra asa iraisana, Eoropa, is, herin'ny rivotra, Nederland, feo, VS
11 Septambra 2019 ao amin'ny 14: 46
Mampalahelo fa io no fenitra sy izay rehetra
eo ambanin'ny anarana hoe Defense
na antsoina koa hoe Global security
Ny sambo sambo filokana iray dia mampiasa solika 200 taonina (= litatra 200.000) isan'andro, indraindray.
Ianao dia afaka mahita ny vidin'ny fiaramanidina fiaramanidina fiaramanidina iray isan'andro, na dia somary tery kely aza izy ireo
manao. jereo eo ambanin'ny fiaramanidina ary maro hafa
16 Septambra 2019 ao amin'ny 09: 37
Mipetraka amin'ny kajy modely vaovao fotsiny izahay avy eo fa tsara ny zavatra rehetra. Avy eo isika manana fahamarinana vaovao, zava-misy na zava-misy marina ... anao ny safidinao!
« Ny NOS sy RTL dia mandinika tsara ny ala lalina mba hamonosana ny vokariny lalina
Asa ve ao anaty ny 911? De Telegraaf dia mamaly ny fanontanianao rehetra! »
Total fitsidihana: 4.198.015
Ny boky vaovao Martin Vrijland mitondra ny lohateny hoe 'Coronavirus covid-19 aiza no hiafarany?' azo ampiasaina izao
Ny tohatra Escher Penrose an'ny FvD mpanohitra, Willem Engel sy Maurice de Hond
Martin Vrijland op Coronavirus, famafazana valala ary faminaniana faminaniana hafa
Maasland op Coronavirus, famafazana valala ary faminaniana faminaniana hafa